ढकाल द्वारा राजस्व ठगी – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 8, 2007 अप्रील 8, 2007 by nepaldiary
ढकाल द्वारा राजस्व ठगी
चन्डि राज ढकाल द्वारा ८६ लाख राजस्व ठगी गरेको समाचार आजको कान्तिपुर ले लेखेको छ । समाचार का अनुसार नक्कली कागजात बनाएर राजस्व छलेर ८६ लाख झ्वाम पारेको आरोप मा राजस्व अनुसन्धान बिभागले ढकाल लाइ बयानका लागी बिभाग मा डाकेको थीयो । तर आफु बिरामी भएको बहाना बनाइ बिभाग मा उपस्थित भएनन । बयानका लागी बोलाउदा समेत नआएपछि ढकाल लाइ गिरफ्तार गरी थप कारबाही गर्ने तयारी पनि राजस्व अनुसन्धान बिभाग ले गरेको छ । ढकाल् को मोमेन्टो एपरेल्स बाट बैक सुविधाको दुरुपयोग गरेको पत्र भेटेपछि विभागले छानबिन अघि बढाएको थियो । २०६३ वैशाख ३१ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा र्गर्न लेखेको चलानी नं। २०११ को पत्रमा उक्त कम्पनीले तीनवटा नक्कली विवरण थपेर ८६ लाखको थप सुविधा लिएको विभागको आशंका छ । १५ दिन अगाडी एउटा कर्मचारी मारा साहुलाइ मजदुर ले तलब नदिएको निहुमा त आन्दोलन चर्काउन पछि नपर्ने ढकाल र उनको मण्डली ले अब अर्को देसब्यापी “सडक नाटक” देखाए कसैले अचम्म नमाने हुन्छ ।
काठमाडौं, चैत २४ – नक्कली कागजात बनाई राजस्व छलेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई बयानका लागि डाकेको छ । त्यो समयमा उनी उपस्थित भएनन् । मोमेन्टो एपरेल्स प्रालिका लागि सामान आयात गर्दा बैंक ग्यारेन्टी नक्कली बनाएर ८६ लाख रुपैया“ राजस्व छली गरेको आरोपमा ढकालमाथि छानबिन भएको हो । उनी मोमेन्टो एपरेल्सका प्रमुख कार्यकारी हुन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार विभागमा बोलाइएका उनले बिरामी भएको पत्र पठाएर एक साता आउन नसक्ने जानकारी दिएका थिए । बयानमा अनुपस्थित भए पक्राउ पर्ुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ । अर्धन्यायिक निकाय विभागले टेलिफोनमार्फ ढकाललाई बयान दिन आउन भनेको थियो । ढकालले शुक्रबारसम्ममा आउने जानकारी गराएका थिए ।बयानका लागि तोकिएको समयमा नआएपछि कानुनअनुसार थप कारबाहीमा जाने तयारीसमेत विभागले गरेको थियो । अर्थ सचिवले त्यसबेला नया“दिल्लीमा रहेका अर्थमन्त्रीलाई सर्म्पर्क गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस’bout जानकारी गराएको सरकारको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीमा जान प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
उनले छली भएको राजस्व र दोब्बर जरिवानासहित शुक्रबारसम्म उपस्थित हुने अनौपचारिक जानकारी दिएका थिए । यसअनुसार ढकालले करिब २ करोड ५५ लाख रुपैया“ धरौटी राख्नुपर्ने थियो । तर उनी उपस्थित भएनन् ।
ढकालले कर्मचारीले यस्तो कार्य गरेको बताए । ‘मोमेन्टोमा डेढ वर्षघि आगलागी भएको थियो,’ उनले भने- ‘त्यही कारण कर्मचारीले यस्तो कार्य गरेको होे, त्यो अहिले छैन । यस्ता कार्यहरू सबै हर्ेन मलाई समय हु“दैन, कर्मचारीको विश्वासमा छाड्ने हो ।’ उनले नियतवश कुनै गलत कार्य नगरेको दाबी गरे । यो घटनालाई आफ्नोतर्फाट पनि छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘छिट्टै सरकारलाई म यसको विवरण दिन्छु,’ उनले भने ।
निकासीजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुटाउन सक्ने प्रावधान छ । निकासी गरेको प्रमाण देखाएपछि सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गर्छ । उक्त समान देशभित्रै बिक्री गरी निकासीजन्य उद्योगलाई दिएको सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुटाउन सक्ने सहुलियत दिएको हो । एउटा भन्सार नाकाबाट सामान आउने अरूबाट निकासी हुने उद्योगमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्रका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुन्छ । तयारी पोसाकको निकासीमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान निकासी भएको प्रमाण हेरेर अन्य भन्सार कार्यालयलाई पनि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न पत्र लेख्ने प्रावधान छ ।
मोमेन्टोबाट यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको पत्र भेटेपछि विभागले छानबिन अघि बढाएको थियो । २०६३ वैशाख ३१ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा र्गर्न लेखेको चलानी नं. २०११ को पत्रमा उक्त कम्पनीले तीनवटा नक्कली विवरण थपेर ८६ लाखको थप सुविधा लिएको विभागको आशंका छ ।
अघिल्लो मुखमा मोइ छैन …..मा घ्यु
अर्को नेपाल डायरी खोज -खबरदार ! नेपाल तस्करको अखडा बन्दै छ ।